qaboojinta kuleylka kuleylka leh kuleyliyaha kulaylka badan
Bogga ugu weyn / Codsiyada / Kuleylka kuleylka / Sifeynta Kuleylka Kuleylka
Category: Kuleylka kuleylka Tags: kuleylka kuleylka, shaabadda kuleyliyaha sare, shaabadda xawaaraha sare, xidhitaanka kuleylka kuleylka, kululaynta tuubada kululaynta, geedi socodka shaabadaynta, kuleylinta kuleylinta kuleylka
Qalabka Is-beddelka kuleylka leh ee Qalabka kuleylka kuleylka sare
Kuleylka induction waxay bixisaa hab xarrago leh oo daboolaya aluminium daboolaya dhalooyinka cuntooyinka. The Induction Kuleylka kuleylka Habka baakadka ayaa hubiya ilaalinta, amniga, nadaafadda iyo ilaalinta alaabada. Kuleylka induction ee filimka aluminiumku wuxuu kordhiyaa heerkulka alaabta daboolka ah ee lagu daboolay dhinaca daboolka ee ku xiran weelka. Kuleylkan waxaa lagu dhejiyaa cadaadis lagu daboolay daboolka 0.5 ilaa 1.5s. Nidaamkan waxaa lagu dabaqayaa dhammaan noocyada weelasha iyo walxo badan oo kala duwan, oo ay ku jiraan: muraayadda, kartoonada, iyo balaastikada (PE, PP, PVC ...).
Xaaladaha oo dhan ma jiro xiriir aan u dhexeeya indhoolaha iyo daboolka. Marka lagu daro faa'iidadaas, waxaa jira dhowr sababood oo sababta habkan cusub loo isticmaalo:
■ Kuleylka waxaa lagu sameeyaa daboolka laftiisa sida
meel u dhow dusha sare ee suurtogalka ah. The
geedi socodka ayaa la fududeeyaa iyo dhibaatooyinka
la xidhiidha kuleylka diidmada
Noocyada madaxa lagu xiro waa la iska ilaaliyaa.
■ Nidaamka xidhitaanka kuleylka induction waxaa loo isticmaali karaa wareega, oval,
laba jibbaaran, qaab ama qaabab kale
■ Dhismaha kuleyliyaha dhexdhexaadka ah ayaa la sameeyaa
iyada oo la adeegsanayo qaybo dawladeed oo adag oo leh maya
qaybo xiran inta lagu jiro geedi socodka kuleylka.
Waxaanu bixinaa dhowr nooc Xakamaynta kuleylka kuleylka Nidaamyada:
■ Qalabka kulaylka induction ee hal-mar ah.
■ Xakamaynta kuleylka kuleylka ee joogtada ah ka hor inta aan lagu xirin.
■ Xakamaynta kuleylka kuleylka ah ee kuleylka ah ka hor intaan la xirin.
Induction Isku xidhka Telefoonka Wareegga Wareegidda
Induction Isugeynta Wareegidda